Sidee ayaan si xaqiiq ah ugu ogaadaa in aan galayo Janada markaan dhinto?
Ma ogtahay arimaha qaarkood in aad leedahay nolol waarta iyo in aad galeysid Janada marka aad dhimato? Ilaahey wuxuu rabaa in aad adiga hubtid! Baaybalka wuxuu yiri: “Waxaan kuu qoray waxyaabahaan adiga kuwa aaminsan magaca Wiilka Ilaahey si markaas aad u ogaatid in aad leedahay nolol daa’im ah” (1 Yooxanaa 5:13). Kasoo qaad waxaad taagantahay Ilaahey hortiisa hadeer iyo wuxuu ku weydiiyay, “Sababteen kuu ogolaada Janada?” Maxaad ku jawaabeysaa? Waxaa laga yaabaa in aadan garaneyn waxa lagu jawaabo. Maxaad u baahantahay in aad ogaatid in uu Ilaahey na jacelyahay iyo nasiiyay wado aan si xaqiiq ah ugu ogaan karno meesha aan ku isticmaaleyno daa’inka. Baaybalka wuxuu sheegay waddadaan: “Ilaahey aad ayuu u jecelyahay aduunka uu siiyay Wiilkiisa kaliya, ee qofwalba oo aamina Isaga mala halaagayo laakin wuxuu helayaa nolol daa’im ah” (Yooxanaa 3:16).
Waa in aan marka hore fahamnaa dhibaatada naga celineysa Janada. Dhibaatada waa midaan - dambigeena dabiiciga ah wuxuu naga celinayaa in aan xiriir la yeelano Ilaahey. Waxaan nahay dambiilayaal dabiici ahaan iyo dooq ahaanba ah. “Dhammaan kuwa galay dambiyo iyo ka gaabiyay ammaanta Ilaahey” (Rooma 3:23). Ma badbaadin karno nafsadeena. “Waayo naxariis ahaan ma badbaadsantahay, dhinaca rumeynta, iyo tani ma ahan shaqsigaaga – waa naxariista Ilaahey. Ma ahan shaqo ahaan, si markaas qofna uusan ugu faanin” (Efesos 2:8-9). Waxan istaahilnaa dhimasho iyo naar. “Culesyka dambiga waa dhimasho” (Rooma 6:23).
Ilaahey waa quduus iyo cadaalad waa in uu ciqaabaa dambiyada, weli Wuuna jecelyahay iyo wuxuu na siiyay cafin dambiyadeena ah. Ciise wuxuu yiri: “Waxaan ahay waddada iyo runta iyo nolosha. Ma jiro qof u imaanaya Aabaha aan ka aheyn aniga oo la isoo marin” (Yooxanaa 14:6). Ciise inaga ayuu istilaabka noogu dhintay: “Masiixiga wuxuu u dhintay dambiyada halmar oo dhamaanteen ah, kuwa xaqa ah oo aan xaqa aheyn si ay kuugu keenaan Ilaahey” (1 Butros 3:18). Ciise wuxuu ka soo noolaaday dhimashada: “Waxaa la gaarsiiyay dhimasho dambiyadeena ah iyo nolasha ayuu ku soo laabtay oo cadeynteena ah” (Rooma 4:25).
Marka, ku laabo su’aasha asalka – “Sidee ayaan si xaqiiq ah ugu ogaadaa in aan galayo Janada markaan dhinto?” Jawaabta waa middaan – aamin Ciisaha Masiixiga Ilaaheyga ah iyo waad badbaadeysaa (Filimaha Rasuulada 16:31). “Ku socoto dhammaan kuwa soo dhaweeyay Isaga, kuwa aaminay Magaciisa, wuxuu siiyay xaqa lagu noqonayo carruurta Ilaahey” (Yooxanaa 1:12). Waxaad heli kartaa nolol daa’in ah sida naxariis BILAASH ah. “Naxariista Ilaahey waa nolol daa’in ah ee Ciise Masiixi Ilaaheygeena” (Rooma 6:23). Waxaad ku noolaan kartaa nolol buuxdo oo micno leh hadeer. Ciise wuxuu yiri: “Waxaan u imid in laga yaabo in ay helaan nolol, iyo ku helaan si buuxda” (Yooxanaa 10:10). Waxaad kula isticmaali kartaa daa’inkaaga Ciise Janada, oo balanta ah: “Iyo haddii aan baxo iyo kuu diyaariyo meel adiga, waan soo labanayaa iyo kuu qaadayaa in aad aniga ila joogtid in laga yaabo sidoo kale in aad joogtid meesha aan joogo” (Yooxanaa 14:3).
Haddii aad rabtid in aad ogolaatid Ciise Masiixiga sida Badbaadiyahaaga iyo cafis ka hesho Ilaahey, halkaan waa docoda aadku doceysan kartid. Dhehida docodaan ama doco walba oo kale kuma badbaadineyso. Waa kaliya aaminaada Ciise Masiixi in uu kuu siin karo cafinta dambiyadaada. Docodaan waxay si fudud uga fogtahay waddada loogu muujinayo Ilaahey rumeyntaada Isaga iyo uga mahadceli Isaga cafiska uu ku siinayo. “Ilaahayow, waan ogahay in aan dambi kaa galay Adiga iyo waxaan istaahilaa ciqaab. Laakin Ciise Masiixi ayaa dambiga aan istaahilay qaatay si markaas dhinaca rumeyntiisa iyadoon ku jirto layga cafin karo. Aaminaadeyda adiga ayaan kugu meeleeyay ee badbaado ah. Waad kumahadsantahay naxariistaada cajiibka ah iyo cafiskaaga! Aamiin!"